AH: ငါ လွှတ်ချကြည့်လိုက်တယ်..
သက္ကရာဇ်တွေ… အထွေးလိုက် အထွေးလိုက်…
သင်္ဘောတွေ အပုံလိုက် အပုံလိုက်….
လေထဲမှာမျောလွင့်သွားတဲ့ အိတ်စပီးရန့်ဆိုသော အရာများ…
မသတီစရာကောင်းတဲ့ လုပ်ပြုံးပြုံးထားတဲ့.. အပြုံးများ..
မှားမှန်းသိရက်နဲ့… compromise လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရာများ…
ဘာတဲ့ Naval Architect ဆိုတာ Science or Art တဲ့…
တကယ်တော့ Naval Architect ဆိုတာ၊ “Art of compromise…”
လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အတိုင်းအတာ၊ ငွေကြေး၊ အချိန် ဒါတွေအားလုံးကြားထဲမှာ…
ငါတို့တွေဟာ စစ်မြေပြင် ရှေ့တန်း က ပွန်းရုပ်ကလေးတွေပဲ…
သိရက်နဲ့ ထမင်းတစ်လုပ်က ကျန်တာတွေထက် ပိုအရေးကြီးလား…
Commitment ဆိုတာ ဘာလဲ? Ethic ဆိုတာဘာလဲ? ခဏလေးတော့ ငါ… အားလုံးကို…
၂ နှစ်စာထက် ပိုမခံတဲ့ စီမံကိန်းများ၊ ၀ိုးတ၀ါး… မျှော်လင့်ချက်များ
ဘ၀.. ဘ၀.. အားလုံးဟာ အိပ်မက်…
အိပ်မက်ကို အသက်သွင်းရန် ကြိုးစားကြသူများ….
Urban အိပ်မက် မက်နေကြသူများ…
ဖတ်လို့ သိပ်ကောင်းတဲ့ တက်ကျမ်းများ… အို..
သူများ ပုခုံးပေါ် နင်းတက်သွားကြသူတွေ…
ငါ့ဘေးမှာ လှေကားကို အလုအယက် တက်နေကြသူတွေ…
ဖောင်ဒေးရှင်းမခိုင်တဲ့ အဆောက်အဦးကြီးကို အက်ကြောင်းဖာနေကြတဲ့လူတွေ…
ဟက်.. ဟက်.. ဟက်.. မတီစတီစရာကောင်းလိုက်တာမှ..
ငါးပိရေနှင့် တို့စရာ မရှိသော အရပ်မှာ ..
မက်ခဲ့ရသော ငါးပိရေ အိပ်မက်များ….
မျှော်လင့်နေသော ၀ိုးတ၀ါး ဒီမိုအိပ်မက်များ….
ထူးမခြားနား.. ဦးနှောက်များနှင့် နောင်နှစ်ပေါင်း ၆၀..
ပြန်လာဖို့ မခေါ်ပါနဲ့ အမေ…
ကျွန်တော့် အတွက် အချိန်မရောက်သေးပါဘူး…
ကျွန်တော် ဟိုမှာ… လူပိုတစ်ယောက်အဖြစ် မနေချင်ပါဘူး…
ခဏလေးအတွင်းမှာ အားလုံး ပေါ့ပါးသွားတယ်..
လေပြေ တွေကတော့ လတ်ဆတ်နေတာပဲ… ငါသာ သတိမထားမိတာ…
မြက်ပင်လေးတွေက လေတိုက်ရာကို ယိမ်းလို့…
နေရောင်ခြည်က ခပ်ဖျော့ဖျော့ အန်ထုတ်လို့…
မနက်ဖြန်အတွက် ပြင်ဆင်နေကြတယ်.. ဒီခဏ
Posted by Aung Htut at 10/13/2013 10:14:00 PM
စံပယ်ချို October 14, 2013 at 5:03 AM
ကျွန်တော် ဟိုမှာ… လူပိုတစ်ယောက်အဖြစ် မနေချင်ပါဘူး-------ခံစားချက်တူတူတွမို့ ခံစားလို့ ကောင်းတဲပကဗျာအဖြစ်...ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ရပါတယ်
ဟန်ကြည် October 16, 2013 at 4:26 AM
အေးဗျာ....ကိုအောင်ထွဋ်ရဲ့ စကားလုံးတွေက ရင်ကို ဒိုင်းခနဲလာထိတယ်ဗျာ...လောလောဆယ်မှာ အရေးပါပေမယ့် အရာမရောက်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုလည်း ပြန်မြင်ယောင်လာမိတယ်...ကျွန်တော်တို့ နေရာမှား အချိန်မှားပြီး ရောက်လာခဲ့သလား မပြောတတ်တော့ပါဘူးလေ...စဉ်းစားမိရင် မနက်ဖြန်ဟာ ဝေသီမှုန်မှိုင်းနေတာပဲ တွေ့ရတယ်...နိုးတ၀က်အိပ်မက်က ဆက်အိပ်ရရင်ကောင်းမလား ထထိုင်လိုက်ရင်ကောင်းမလားနဲ့ စဉ်းစားနေမိတာလဲ အခါခါပါပဲ...
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) October 16, 2013 at 11:08 PM
သိပ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေး ဗျာ ။
ေ၀၀ါးမှုန်မှိုင်းစွာ လေးကန် ထိုင်းမှိုင်းစွာ
ကျနော်တို့ ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ်ခက်စွာ ။
ရင်လှိုင်း November 28, 2013 at 12:37 PM
တစ်ခါတစ်လေ စိတ်လိုလက်ရ လွှတ်ချကြည့်သင့်တာပေါ့နော်။ ပေါ့ပါးသွားမယ်ထင်တယ်နော်။
Note3or 5s
ပြောရရင်တော့ ဒီပိုစ့်ဟာ အားနေလို့ ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ စီလုတ်ပြည်ကြီးမှာ ရောက်နေသော အကျွန်ုပ်တစ်ယောက် တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ပိတ်ရက်အ...
စင်ကာပူပြန်ရောက်နေတဲ့ ရက်ပိုင်းတုန်းက ထရွိုင်မြို့အကြောင်း ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်… နောက်ပြီး စိတ်ဝင်စားလို့ ဟိုရှာဖတ် ဒီရှာဖတ်နဲ...
ဒီနေ့ ကျွန်တော့် လက်ရှိပရောဂျက်ရဲ့ နောက်ဆုံး သင်္ဘောအတွက် Sea Trial လိုက်နေတာနဲ့ ခုမှပြန်ရောက်ပါတယ်။ ပြန်ရောက်တော့မှ ဆက်ရေးမယ်ဆိုတော့ ဘာရေ...
စင်္ကာပူ ပြန်ရောက်တုန်း အချိန်လေးရတာနဲ့ ဖူးနုသစ် မှာ ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီလအတွက် လာရောက်လည်ပတ်သူ အများဆုံး မြန်မာဘလော့ဂ် ၅၀ ကို update လုပ်ဖို့ စိတ...